ဟောလိဝုဒျကို အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့ Reese Witherspoon ရဲ့ ရဲရငျ့သော ဘဝဇာတျကွောငျး - ONE DAILY MEDIA
မငျးသမီးတဈဦးလဲ ဖွဈသလို ထုတျလုပျသူ ၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈဦးလဲ ဖွဈတဲ့ Reese Witherspoon ရဲ့အကွောငျးမြားကတော့ ပွောမကုနျနိုငျအောငျမြားစှာရှိပါတယျ။သူမဟာ ပိတျကားပျေါတှငျသာမက ကိုယျပိုငျဘဝမှာလညျး အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူဖွဈပါတယျ။ သူမက Stanford တက်ကသိုလျမှာ တကျရောကျခဲ့ဖူးသျောလညျး အသကျ(၂၃)နှဈအရှယျ ပထမရငျသှေးမရမှီကပငျ ကြောငျးထှကျပွီး မိသားစုစားဝတျနရေေးအတှကျ ရုနျးကနျဖို့ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ အောငျမွငျမှုရဲ့သော့ခကျြမြားကို ကောငျးစှာသိသူတဈဦးလို့လဲ ‌ဆိုနိုငျပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ သူမရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးမြားနဲ့သူမရဲ့ အံ့မခနျးအောငျမွငျမှုမြား အကွောငျးကို စိတျဓာတျခှနျအား လိုအပျနမေယျ့ စာဖတျပရိတျသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) သရုပျဆောငျဘဝ၏ အံ့ဩဖှယျအစ
သူမရဲ့သရုပျဆောငျဘဝကို စတငျတံခါးဖှငျ့လှဈပေးခဲ့တာကတော့ သူမအသကျ(၁၄)နှဈအရှယျမှာ စတငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Man in the Moon ဆိုသညျ့ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။ထို့နောကျ အသကျ(၂၅)နှဈအရှယျမှာ သူမဟာ ထိပျတနျးသရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနပွေီးဖွဈသလို့ အသကျ(၂၉)နှဈအရှယျမှာတော့ Johnny Cash ရဲ့ “Walk the line” ဇာတျကားဖွငျ့ အျောစကာဆု ရရှိခဲ့ပါတယျ
ကွီးမားသောအောငျမွငျမှုမြား ရရှိနပွေီးနောကျမှာတော့ သူမဟာ ဘဝရဲ့စိနျချေါမှုအခြို့ကို စတငျရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ အိမျထောငျရေးပွိုကှဲခဲ့ရပွီး ကလေး(၂)ယောကျနဲ့အတူ ဘဝကိုရုနျးကနျရဖို့ ဖွဈလာပါတယျ။ဤသိူ့ဖွငျ့ သူမ
အသကျ(၃၆)နှဈ အရှယျမှာတော့ ဇာတျကားမြားရိုကျကူးမှုလဲ ရပျတနျ့သှားခဲ့ရပွီး ဟောလိဝုဒျနာမညျကွီး ဇာတျဆောငျစာရငျးမှာလညျး ပြောကျကှယျသှားခဲ့ပါတယျ။ဘဝရဲ့စိနျချေါမှုမြားကွောငျ့ သူမရဲ့ဦးတညျရာမြားပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ။
(၃) ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးသော စိတျကွိုကျဇာတျကောငျမြားဖွငျ့ အသကျမှေးခွငျး
သူမက စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အမြိုးသမီးအဓိက ဇာတျဆောငျမြားကို ဖနျတီးအသုံးမပွုခွငျး အပျေါမေးခှနျးထုတျခဲ့ပါတယျ။အမြိုးသားဇာတျဆောငျမြားကို အဓိကပှဲထုတျသော ဇာတျကားမြားကို ငွီးငှနေ့ပေါတယျ။ထို့ကွောငျ့
သူမဟာ Hello Sunshine လို့အမညျရတဲ့ ကိုယျပိုငျထုတျလုပျရေး Company တဈခုကို စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး သူမစိတျကွိုကျအမြိုးသမီး အဓိကဇာတျဆောငျမြားကို စတငျဖနျတီး သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ယခုအခါမှာတော့ သူမဟာ ကိုယျတိုငျထုတျလုပျသူတဈဖွဈလဲ သရုပျဆောငျ အဖွဈ ရုပျရှငျလောကကို ပွနျလညျခွခေလြာခဲ့ပါတယျ။
သူမထုတျလုပျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Big little lies , Gone Girl , Wild အစရှိသညျ့ ရုပျရှငျမြားသာ တဈဖနျပွနျလညျအောငျမွငျလာခဲ့ပွီး Wild ဇာတျကားဟာဆိုရငျ အကယျဒမီဆု စကာတငျစာရငျးပငျ ဝငျခဲ့ပါတယျ။
(၄) ရပျတနျ့မရနိုငျသော သူမ
အခုခြိနျမှာတော့ သူမဟာ မငျးသမီး ၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ၊ ရုပျရှငျထုတျလုပျသူ စသဖွငျ့ နယျပယျအသီးသီးမှာ အရညျအခငျြးရှိသူတဈဦးအဖွဈ အကွှငျးမဲ့သတျမှတျခံထားရပါပွီ။ထို့အပွငျသူမက သတငျးအစီအစဉျမြား ၊ Podcasts , Youtube , Live video မြားမှ တဈဆငျ့လဲ အမရေိကတဈလှားရှိ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ပညာပေးအစီအစဉျမြား ပါဝငျဟောပွောလရှေိ့ပါတယျ။
(၅) အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ရှဆေ့ောငျလမျးပွ
သူမဟာ ဟောလိဝုဒျရုပျရှငျလောက၏ အမြိုးသမီးခေါငျးဆောငျ ပါဝငျသော ရုပျရှငျဇာတျလမျးမြား စတငျရိုကျကူးလာမှု အပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုမြားစှာ ရှိစခေဲ့သညျသာမက အမြိုးသားနှငျ့အမြိုးသမီး သရုပျဆောငျမြားအကွားမှ ဝငျငှပေမာဏ ကှာခွားမှုကို မွငျသာစတေဲ့ Time’s up Movement မှာလညျး ပါဝငျလှုပျရှားခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ အနာဂတျမှာ ဟောလိဝုဒျမှ အမြိုးသမီးသရုပျ‌ဆောငျမြားကို သူမငယျစဉျကကဲ့သို့ အခကျအခဲမြား မတှကွေုံ့ရစရေနျ လမျးသဈဖောကျပေးခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရော ဘဝအခကျအခဲမြားကို ရဲရငျ့စှာ စိနျချေါကြျောဖွတျနသေူအမြိုးသမီး မြားကို မွငျတှဖေူ့းပါလား ? စိတျဓာတျ ကွံ့ခိုငျသနျမာသော အမြိုးသမီးကောငျးမြားစှာ ရှိနနေိုငျပါသေးတယျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျမွငျတှဖေူ့းသူမြား အကွောငျးကိုလညျး အကွံပွုရေးသားခဲ့နိုငျပါတယျ။
ဟောလိဝုဒ်ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Reese Witherspoon ရဲ့ ရဲရင့်သော ဘဝဇာတ်ကြောင်း
မင်းသမီးတစ်ဦးလဲ ဖြစ်သလို ထုတ်လုပ်သူ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ဦးလဲ ဖြစ်တဲ့ Reese Witherspoon ရဲ့အကြောင်းများကတော့ ပြောမကုန်နိုင်အောင်များစွာရှိပါတယ်။သူမဟာ ပိတ်ကားပေါ်တွင်သာမက ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာလည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမက Stanford တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် ပထမရင်သွေးမရမှီကပင် ကျောင်းထွက်ပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်များကို ကောင်းစွာသိသူတစ်ဦးလို့လဲ ‌ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းများနဲ့သူမရဲ့ အံ့မခန်းအောင်မြင်မှုများ အကြောင်းကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အား လိုအပ်နေမယ့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) သရုပ်ဆောင်ဘဝ၏ အံ့ဩဖွယ်အစ
သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ဘဝကို စတင်တံခါးဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာကတော့ သူမအသက်(၁၄)နှစ်အရွယ်မှာ စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Man in the Moon ဆိုသည့်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ်မှာ သူမဟာ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီးဖြစ်သလို့ အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ်မှာတော့ Johnny Cash ရဲ့ “Walk the line” ဇာတ်ကားဖြင့် အော်စကာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်
ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများ ရရှိနေပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာ ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုအချို့ကို စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲခဲ့ရပြီး ကလေး(၂)ယောက်နဲ့အတူ ဘဝကိုရုန်းကန်ရဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ဤသိူ့ဖြင့် သူမ
အသက်(၃၆)နှစ် အရွယ်မှာတော့ ဇာတ်ကားများရိုက်ကူးမှုလဲ ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပြီး ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီး ဇာတ်ဆောင်စာရင်းမှာလည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုများကြောင့် သူမရဲ့ဦးတည်ရာများပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
(၃) ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသော စိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်များဖြင့် အသက်မွေးခြင်း
သူမက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးအဓိက ဇာတ်ဆောင်များကို ဖန်တီးအသုံးမပြုခြင်း အပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်များကို အဓိကပွဲထုတ်သော ဇာတ်ကားများကို ငြီးငွေ့နေပါတယ်။ထို့ကြောင့်
သူမဟာ Hello Sunshine လို့အမည်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေး Company တစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သူမစိတ်ကြိုက်အမျိုးသမီး အဓိကဇာတ်ဆောင်များကို စတင်ဖန်တီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာတော့ သူမဟာ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် အဖြစ် ရုပ်ရှင်လောကကို ပြန်လည်ခြေချလာခဲ့ပါတယ်။
သူမထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Big little lies , Gone Girl , Wild အစရှိသည့် ရုပ်ရှင်များသာ တစ်ဖန်ပြန်လည်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး Wild ဇာတ်ကားဟာဆိုရင် အကယ်ဒမီဆု စကာတင်စာရင်းပင် ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) ရပ်တန့်မရနိုင်သော သူမ
အခုချိန်မှာတော့ သူမဟာ မင်းသမီး ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ စသဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အရည်အချင်းရှိသူတစ်ဦးအဖြစ် အကြွင်းမဲ့သတ်မှတ်ခံထားရပါပြီ။ထို့အပြင်သူမက သတင်းအစီအစဉ်များ ၊ Podcasts , Youtube , Live video များမှ တစ်ဆင့်လဲ အမေရိကတစ်လွှားရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်များ ပါဝင်ဟောပြောလေ့ရှိပါတယ်။
(၅) အမျိုးသမီးများအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ
သူမဟာ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောက၏ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ပါဝင်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ စတင်ရိုက်ကူးလာမှု အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ ရှိစေခဲ့သည်သာမက အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်များအကြားမှ ဝင်ငွေပမာဏ ကွာခြားမှုကို မြင်သာစေတဲ့ Time’s up Movement မှာလည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ အနာဂတ်မှာ ဟောလိဝုဒ်မှ အမျိုးသမီးသရုပ်‌ဆောင်များကို သူမငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ အခက်အခဲများ မတွေ့ကြုံရစေရန် လမ်းသစ်ဖောက်ပေးခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ဘဝအခက်အခဲများကို ရဲရင့်စွာ စိန်ခေါ်ကျော်ဖြတ်နေသူအမျိုးသမီး များကို မြင်တွေ့ဖူးပါလား ? စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်သန်မာသော အမျိုးသမီးကောင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်မြင်တွေ့ဖူးသူများ အကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်။